Hetsika Manerantany Manohitra Ilay Foibe Famokarana Herinaratra Mandeha Amin’ny Arintany Any akaikin’ny Ala Honkon’i Sundarbans · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Febroary 2017 12:19 GMT
Hetsi-panoherana tany Londona Sary : Facebook.com/SaveSundarbans.SaveBangladesh
Mifototra amin'ny ampahan-dahatsoratra nosoratan'i Jenny Zapata López ho an'ny 350.org, fikambanana manangana ny hetsika manerantany hiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, ary navoaka indray eto amin'ny Gloval Voices noho fifanekena fifampizarana votoaty, ity lahatsoratra ity.
Nanangona ireo feo manerana izao tontolo izao mitaky ny hiarovana an'i Sundarbans ilay androm-panoherana manerantany. Faritra iray midadasika any atsimon'i Bangladesh sy India i Sundarbans, ary ialokalofan'ilay hany alanà honko lehibe indrindra manerantany sy ireo karazam-biby ahiana ho lany taranaka toy ny tigra Bengal sy ny feson'i Irrawaddy.
Vinavinain'ireo mpikarakara fa manodidina ny 4.000 ireo olona naneho ny firaisankinany tamin'ilay hetsi-panoherana nandritra ny dimy taona nataon'ny vahoaka ho fitsipahana ny fananganana foibe famokarana herinaratra ao Rampal any Bangladesh.
Tany amin'ny Union Square tany New York City. Sary: Zawaad Abdullah
Ao anatin'ny lisitry ny Lova Iombonana Manerantanin'ny UNESCO ny Sundarbans noho ny fifangaroam-piaina tsy manam-paharoa ananany, sady voatendry ho faritra tany mando arovan'ny Ramsar noho ny haben'ny velaran'ny eran'ny rafi-piainana an-dranomamy ao aminy. Fa eo akaiky eo no ikasàn'ny Kaompania nasionaly ho an'ny angovo azo avy amin'ny hafanana avoakan'ny oro, an'ny governemanta Indiana sy ny Komity momba ny fampivoarana ny angovon'i Bangladesh, hametrahana foibe famokarana herinaratra 1320 MW mandeha amin'ny fandoroana arintany amin'ny alàlan'ny tetikasa antsoina hoe Bangladesh-India Friendship Power Company Limited (kaompanian'angovon'ny fisakaizana eo amin'i India sy Bangladesh) (BIFPCL).
Araka ny filazan'ny fikambanana iray any Bangladesh, ny Komity Nasionaly Miaro Ny Solika, Entona, Harena an-kibon'ny tany, Angovo sy ny Seranana, dia tsy loza mananontanona ny fiveloman'ny vahoaka 3,5 tapitrisa fotsiny no aterak'ilay ozinina fa hamela ireo 50 tapitrisa mponina amorontsiraka ho mora azon'ny loza voajanahary ihany koa satria fiarovana voajanahary amin'ny rivodoza, rivomahery ary ireo loza voajanahary hafa ao amin'ny firenena i Sundarbans.
Ireo mpanohana avy any Tiorkia mijoro eo anoloan'ny toerana iray misy ny Lova Iombonana Manerantany iray any Izmir mba haneho ny firaisany amin'ny Androm-panoherana Manerantany. Sary :350.org Tiorkia
Nidina an-dalambe ny vahoaka tany Dhaka, La Haye, Londona, Berlin, Parisy, Gwangju, Hordland, Turku, Kolkata, New York, Melbourne sy ny maro hafa ho setrin'ilay antso natao tamin'ny volana Novambra teo, nandritra ilay fivoriambe natao tany Dakha, izay nahavoriana olona 15.000 taorian'ireo andro nanaovana diabe tany amin'ny faritra samy hafa tao amin'ny firenena namonjy ny renivohitra.
14 kilaometatra miala ny fetran'ny faritr'i Sundarbans ary 70 kilaometatra miala ny fetran'ny faritry ny Lova Iombonana Manerantany no hametrahana ilay ozinina ao Rampal. Arintany manodidina ny 4,75 tapitrisa taonina isan-taona no dorana mba hihodinany, ary setrin'izay dia entona dioksidanà karbôna 7,9 tapitrisa taonina isantaona no vinavinaina fa havoakany ho eny amin'ny habakabaka. Arintany hafarana, taterina sambo amin'ny sakelidrano tery, izay hanampy ny loza mety hiseho amin'ny fihanahan'ny solika sy ny arintany, ary ny tabataba fandotoana ao amin'ny reniranon'i Poshur no ianteherany. Mba hampangatsiahana ilay kodiaramiliny, dia hisintona rano 9.150 metatra toratelo isanora avy ao amin'ilay renirano ilay foibe famokarana ary hanary rano 5.150 metatra toratelo, izay araky ny fanakianana dia handoto sy hanakorontana ny fifandanjàn'ny fiainana ao anaty rano izay miankina amin'ny ala honko izany.
Eo andalam-pivoarana mantsy ny fanaovana ny fidirana sy ny fotodrafitrasa ara-barotra ho an'ilay ozinina, na teo aza ny fanoherana ny fanaovana ilay ozinina ao Rampal, ary nisy didy vaovao avy any amin'ny UNESCO mba hanalàna sy hamindràna ilay tetikasa, izay na ireo mpiasam-mpanjakan'ny governemantan'i Bangladesh aza dia nanaiky izany.
Etsy andaniny, ny Praiminisitr'i Bangladesh kosa dia manamafy fa tsy eken'ny governemanta io tetikasa io raha ” mety hisy karazana loza” hanjò ny tontolo iainana. Nohamafisin'ny lehiben'ny mpiahy ny tontolo iainana any Bangladesh, ny Dr Ansarul Karim, fa loza mitatao goavana kokoa atrehan'ny Sindarbans mihoatra noho ny foibe famokarana herinaratra ny firoborobon'ny orinasa ao amin'ny seranan-tsambon'i Mongola, seranana izay raha ara-paritra dia tena akaiky ny faritry ny ala sady mifandray aminy amin'ny alàlan'ireo sakelidrano.
Izmir, Tiorkia. Sary: 350.org Tiorkia
Mandritra izany fotoana izany, dia mbola miantso ny governemanta any Bangladesh hanafoana ilay foibe famokarana herinaratra amin'ny alàlan'ny fandorana arintany any Rampal ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena ary mba hanohy ny fampiroboroboan'ireo mpitarika ao amin'ny firenena ny famokarana angovo azo avy amin'ny masoandro. Miatrika olana amin'ny famatsiana angovo i Bangladesh amin'izao fotoana izao, 74%-n'ny mponina fotsiny no mahazo izany avy amin'ny tambajotran'ny fanjakana, nefa i Bangladesh no firenena ahitàna ny fitombon'ny rafitry ny fahazoana angovo avy amin'ny herin'ny masoandro betsaka indrindra manerantany, 60.000 isa isam-bolana no eo voapetraka.
Azo jerena amin'ny Facebook ny lahatsary fohin'ilay hetsi-panoherana tany Dhaka. Betsaka ny sary tamin'ny andro manerantany ho an'ny fanoherana hita ato amin'ity tahirin-tsary ity.